Nhau - Tarisa kuno! Mafungu akakura emidziyo yekudhinda yepamberi uye zvekudhinda zvakasvibirira zvakafumurwa pano
Robhoti akangwara typetting uye otomatiki kudhinda, girini yezvakatipoteredza zvinhu zvinounza wakasununguka zvinoonekwa zvinoitika, uye zvakapfava kudhinda zvinoita zvakadhindwa zvigadzirwa zviwedzere munhu ... Pa 10 Beijing International Printing Technology Exhibition, yakavhurwa muBeijing musi wa 23, batch yemhando yepamusoro michina uye girini zvinhu , Maitiro eSystem, nezvimwe, zvinoratidzwa pamwechete, kuendesa shanduko nyowani uye maitiro muindasitiri yekudhinda muzera redhijitari.
Kudhinda haingori indasitiri yakakosha mune zveupfumi nemagariro, asiwo inotakura nhoroondo inorema. Kudhinda kwakatangira kuChina. Kuunzwa kwemhando yekufambisa inodhindwa kubva kuChina kuenda kumadokero kwakasimudzira kusimukira kwenzanga yekuMadokero. Shanduko dzinoverengeka dzeindasitiri pasi rose dzakasimudzira kuvandudzwa kwekudhinda tekinoroji nemidziyo, uye michina yekudhinda yemapepa-yakapihwa, webhu michina yekudhinda, uye michina yedhijitari.
Iti kuonekana ne "lead uye moto", pinda mu "mwenje nemagetsi", uye ugumbundire "nhamba uye network". Ndichiri yakazvimirira hunyanzvi, yangu nyika yekudhinda indasitiri inoshingairira kuunza, kugaya uye kunotora epamberi matekinoroji, uye yaita inoshamisa kufambira mberi mukuvandudza kwe green, dijitari, akangwara, uye akabatanidzwa budiriro.
Zvinoenderana nedhata kubva kuChina Printing and Equipment Industry Association, na2020, indasitiri yekudhinda yenyika yangu ichave nemakambani angangoita zviuru zana uye anopfuura mazana maviri enzvimbo dzekushambadzira dzemidziyo nemidziyo. Kubva muna Ndira kusvika Kubvumbi 2021, iyo yakawedzera kukosha yeiyo yekudhinda uye yekurekodha midhiya yekuburitsa indasitiri yakawedzera neanopfuura makumi maviri muzana gore-ne-gore.
Nepo simba rese reindasitiri yekudhinda rave nani, iwo musika mukuru weChinese wekudhinda wawanawo kutarisisa.
Wang Wenbin, sachigaro weChina Printing and Equipment Industry Association, akataura pamhemberero yekuvhura kuti vanogadzira vanopfuura 1,300 vanobva kunyika gumi nenhatu nematunhu vakapinda muchiratidziro ichi. Akateedzana emakambani anozivikanwa ekudhinda akaratidzira tekinoroji yavo yekutanga uye zvigadzirwa zvitsva. Chiratidziro chakanyatsoteedzera hunyanzvi hwekudhinda tekinoroji, kumisikidza chiziviso chakazara, dijitari prepress, michina yekudhinda, michina yemazita, post-yekudhinda theme, kurongedza theme uye dzimwe dzimba dzemusoro, yakatangisa yakasvibirira uye inyowani theme paki, uye yakanyanya kuratidzwa yaive kumberi-kutarisa uye kutungamira Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, matekinoroji uye maitiro ekushandisa.
"Chiratidziro hachiratidze chete hunyanzvi hwekugadzira michina nemidziyo, asi chinoshandawo sehwindo rekunzwisisa shanduko mumusika wevatengi unodikanwa wekudhinda nekupakata michina nezvimwe zvinoenderana." Wang Wenbin akataura kuti kunyangwe ichivimba nezvekufambisa kwehupfumi kwechiratidziro, indasitiri yekudhinda iri kuwedzerawo kupihwa uye kudiwa kwekumisidzana uye kuchinjana kwehunyanzvi. Baya jekiseni nyowani mukuita kwekuenderera kwekuvandudza.